Ny hananan’ny tsirairay Baiboly no tanjona - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
«Ny Baiboly: teny manasitrana sy mampihavana » no teny faneva entina manamarika ny Alahadin’ny Baiboly amin’ity taona ity. Handraisan’ny Fiangonana kristianina rehetra anjara eto amin’ny firenena. Nampifandraisina manokana amin’ny zava-misy eto amin’ny firenena io lohahevitra io, araka ny fanazavan’Atoa Nambinina, tompon’andraikitry ny fifandraisana eo anivon’ny FMBM. Tsapa fa toa latsaka ao anatin’ny fifankahalana ny mpiray tanindrazana noho ny olana ara-politika lavareny. Miteraka ratram-po lalina izany. Ary na ny Fiangonana aza dia toa voahozongozon’ny tsy fifanarahan-tsaina sy ny fifandirana isan-karazany. Mila sitranina izany ratra mahazo ny mpiray tanindrazana izany, amin’ny fandinihina ny tenin’Andriamanitra. Hiaikena ny tsy mety natao ka hifamelan-keloka. Dingana hirosoana amin’ny fampihavanana marina, araka an’Andriamanitra.
Mila mamaky ny Tenin’Andriamanitra araka izany ny olona. Mitaky fampielezana ny Baiboly izay. Mandray anjara amin’izany ny FMBM, manana ny foibeny ao Antaninarenina Antananarivo. Antom-pisian’ity fikambanana ity moa ny fandikana ny Soratra Masina amin’ny fiteny azon’ny olona, ny mamokatra Soratra Masina amin’ny endriny ilan’ny olona azy, ny fampielezana ny Soratra masina amin’ny vidy mety takatry ny olona, ny fampiofanana sy fanentanana ny fandinihana sy ny fampiasana ny Soratra Masina.
Efa tranainy sy simba ka mila fanarenana ny trano foiben’ny Mampiely Baiboly ao Antaninarenina. Ka entanina ny tsirairay mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny ezaka fanamboarana ny foibe vaovao. Ka ho taratry ny fahasitranana sy ny fihavanana marin’ny Fiangonana rehetra io hetsika io. Miara-miasa amin’ny Fiangonana tsy ankanavaka rahateo ny FMBM, na katolika, na protestanta, sy ny maro hafa. Tombanana ho eo amin’ny 150 000 tamin’iny taon-dasa iny ny filana Baiboly eto Madagasikara, hoy Atoa Nambinina, 82 583 ihany anefa no voaely. Mbola betsaka izany ny ezaka miandry amin’ny fampielezana ny Baiboly.
Fandaminana ny amin’ny fampielezana ny Baiboly
Ezaka mitohy hatrany ny fampielezana ny Baiboly. Ary miara-mientana amin’izany ny Fiangonana isan-tokony. Anisan’ny fandraisana anjara amin’izany ny fisian’ny rakitra ataon’ny isam-piangonana, izay samy manana ny fandaminany amin’ny fanaovana azy.
Ho an’ny Fiangonana katolika, dia isan’ny manao izany manokana ny Fikambanan-drelijiozy Filles de St Paul. Hita taratra ny faharisian’ny olona te hanana Baiboly, hoy i masera Odile, saingy iaraha-mahalala ihany koa ny fahasahiranan’ny olona tsy dia ahafaha-manoatra loatra. Fa tsy mitsahatra ny manao fanentanana ny Fikambanana, indrindra tamin’ny fanamarihana ny faha 75 taonan’ny Baiboly katolika malagasy tamin’ny taon-dasa. Mitety paroasy, mitety sekoly, manao fitsidihana any rehetra any. Manao fanentanana amin’ny radio sy ny gazety, toa ny RDB sy ny gazety Lakroa. «Nahitana akony ireny fanentanana ireny, hoy i masera Odile, amin’ny fanafaran’ny olona Baiboly aty aminay». Miara-miasa rahateo amin-dry mompera any amin’ny paroasy ry masera amin’ny fanentanana atao. Ny tanjona dia ny mba hananan’ny olona Baiboly, farafaharatsiny isan-tokantrano.
Fahita ihany koa ny olona manao fanomezana Baiboly amina fahazoam-pahasoavana, toy ny mariazy na komonio voalohany na tsingerin-taona. Fampielezana ny Baiboly avokoa izany. Misy ihany koa ny paroasy manao ezaka mba hahazoan’ny kristianina ao aminy Baiboly. Lafo vidy manko ny Baiboly raha mitaha amin’ny fahefa-mividin’ny olona. Varotan’ny paroasy sasany amin’ny vidy ambany noho ny nividianana azy tany amin-dry masera ny Baiboly, noho izany. Ny paroasy no mizaka ny elanelany. Ho an’ny Baiboly katolika, amidy 15 000 Ariary ny Baiboly lehibebe miloko manga ny fonony, natonta farany. Ary 20 000 Ariary ilay kelikely mora enti-tanana, azo atao ao anaty poketra. Efa nivoaka ihany koa ny Testamenta vaovao izay amidy 10 000 Ariary.
Fanentanana ny hampielezana ny Baiboly moa no anton’ny fanamarihana ny Alahadin’ny Baiboly, indrindra manoloana ny fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena mamparefo ny firaisan-kina sy ny fihavanana. Tsara ny fananana Baiboly fa ny famakiana sy ny fiainana ny voarakitra ao anatiny no tena zava-dehibe. Andalan-teny fandinika amin’izany ny voalazan’ny Soratra Masina ao amin’ny Korintianina hoe: «Meteza hampihavanina amin’Andriamanitra ianareo» (2 Kor 5, 20).